Iimfihlelo kwi-Best Herb Grinder
I-grb ye-herb ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yicuba okanye igriza yokhula isetyenziselwa ukunqunqa okanye ukusika amayeza okanye iziqholo. Kukho ukwahluka okwahlukileyo kwe-herb grinder kuxhomekeke kwinani leenxalenye zezinto ezenziweyo okanye into eyenziweyo ngayo okanye umatshini osetyenziselwa ukugaya amakhambi. Nazi ezinye ...Funda ngokugqithisileyo »
YINTONI IBANDLA? Isikhuselo sisixhobo esenziweyo sokugraya amakhambi kunye neziqholo kwiibits ezincinci. Ingasetyenziselwa ukugaya amakhitshi ekhitshini, kodwa asetyenziswa kakhulu ukugraya intsangu kwiincindi ezincinci. I-grinder eqhelekileyo iqulathe ii-halves ezimbini ezinokwahlulahlula kwaye zibe namazinyo abukhali ...Funda ngokugqithisileyo »
Itekhnoloji yesityalo se-LED ichaza ulwazi kunye nosetyenziso lwethiyori
Okwangoku, iindidi zezibane zezityalo ezivenkileni zinokwahlulwa ngokwezizukulwane ezithathu: Isibane sesityalo sokuqala se-LED sinomlinganiselo osisigxina obomvu noblowu, kunye nokukhanya okungagungqiyo, kunye nokunikezelwa kombane kweDC. Ukukhanya kwesityalo sesibini esikhoyo rhoqo kwisibane esine-rat emiselweyo ...Funda ngokugqithisileyo »